Kalluumaysiga Sharcidarrada, Xeebaha Galmudug & Musuqmaasuqa Masuuliyiinta – Radio Daljir
Nofeembar 22, 2021 3:08 b 0
Ciidamada ilaalada xeebaha Galmudug ayaa 14 kii bishan Nofember qabtay markab kuwa kaluumaysiga ah oo laga leeyahay dalka Shiinaha kaas oo si sharcidarro ah uga kaluumaysanayey xeebaha degmada Hobyo. Markabkan oo ay saarnaayeen 17 qof oo shaqaale ah ayaa si degdeg ah loogu siidaayey amar ka soo baxay Xafiiska Madaxweynha Galmudug kaddib markii ay wada hadleen masuuliyiin ka tirsan Wasaradda Kaluumaysiga & Khayraadka Badda ee Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug.
Maamulka Galmudug ayaa sheegay in markabku uu haysto oggolaansho rasmi ah oo uu ku saxiixanyahay Wasiir Kuxigeenka Wasaarada Kaluumaysiga iyo Khayraadka badda Soomaaliya Cabdilaahi Cumar Abshirow, oggolaanayana in afar markab oo kani ku jiro ay muddo bil ah si tijaabo ah u kalluumeysan karaan, asaga oo kalluumaysigaas ku sheegay in uu yahay “xog iyo cilmi arurin ku saabsan nooca kalluun ee aagga laga helo.” Waraaqaha oggolaanshaha waxaa Wasaaraddu ay Galmudug la qaybsatay kaddib markii markabka la soo qabtay. Wasaaradda ayaa qiratay in ‘khalad’ dhacay, waxayna codsatay in ay arrinta si hoose loo xalliyo, oo aan wax faahfaahin ahna shacabka lala qaybsan. Waqti yar kaddib maamulka Galmudug ayaa ku amray markabka kalluumeysiga inuu ka baxo badda Soomaaliya, sida ay sheegeen ilo xogogaal ahi.
Markabka kalluumaysiga ee la qabtay, deedna la siidaayey ayaa magaciisa lagu sheegay LU QING YUAN YU 335, waxaana taas xaqiijin u ah sawiro (A) laga qaaday markii markabka la soo qabtay oo la barbardhigay sawirro markab kale oo Shiinees ah (B), ahna kuwa badda xaalufiya ee jariifka oo horay sawirkiisa loo qaaday mar uu markabku ku siijeeday biyaha Waqooyiga Kuuriya. Sidaas darteed shaki kuma jiro in markabkaas la qabtay iyo saddexda markab ee kale ee kala ah LU QING YUAN YU 333, 328 iyo 329 ee ay Wasaaradda Kaluumaysiga Soomaaliya oggolaanshaha siisay ay dhammaantood yihiin kuwa badda xaalufiya ee loo yaqaan maraakiibta jariifka.
Waxaa jira dhowr sababood oo sheegashada Wasaarada Kaluumaysiga ka dhigaya sharcidarro iyo waliba waxba-kama-jiraan, kuwaas oo kala ah waa marka horee, tallaabadani waxay jabisay sharciga Kalluumaysiga Soomaaliyeed (Qodobka 33, No.1) ee dhammaan noocyada jariifka ka mamnuucaya badda Soomaaliya. Waa marka labaad e, maraakiibtan ayaa si qarsoodi ah ugu diiwaangashan calan Soomaaliya (Somali-flagged) taasoo macnaheedu yahay Soomaaliya ayaa ka mas’uul ah (flag state and coastal state). Mid seddexaad ayaa ayana ah in maraakiibtani yihiin kuwa loo yaqaan “maraakiibta madow,” oo macnaheedu yahay in ay bad-aqoonsigooda damiyaan (automatic identification system AIS) si aan loo ogaan in ay ku hawlanyihiin kalluumaysi sharcidarro ah. Tan afraad ayaa iyana ah in falkani ku xadgudbay aagga 24 mayl-badeedka ah (Nautical miles) ee loo qoondeeyay kalluumaysatada Soomaaliyeed. Qodobka shanaad ayaa asna ah in markab ganacsi lagu sheego in uu muddo bil ah ka shaqaynayo “xog iyo cilmi arurin ku saabsan nooca kalluun ee aagga laga helo” waa qodob kale oo shaki badan abuuraya. Qodobka lixaad ee ugu danbeeya ayaa asna ah in madaxda maamulka Galmudug oo uu kamidyahay Wasiirka Dekedaha iyo Kalluumeysiga aan horay loogu wargelin maraakiibtan iyo ujeedada laga leeyahay.
Intaas kor ku xusan oo dhan waxaa sii dheer in dukumeentiga oggolaanshaha kalluumeysiga uu qalday magaca wasaaradda, mana uusan bixin wax tafaasiil ah oo ku saabsan nooca iyo cabbirka maraakiibta, nooca xogta la ururin doono, hay’adda wadda cilmibaarista, iyo agabka loo isticmaalayo xog ururinta. Waxaan email u dirnay Wasiir Kuxigeenka Wasaarada Kaluumaysiga iyo Khayraadka Badda ee Soomaaliya Md. Cabdullaahi Cumar Abshirow waxaana weydiiney su’aalo dheeraad ah. Mudane Abshirow kama jawaabin iimaylka loo diray.
Sheegashada Wasaarada Kaluumaysiga iyo khayraadka Badda Soomaaliya ee “xog iyo cilmi arurin ku saabsan nooca kalluun ee aagga laga helo” waa wax lagu qoslo oo kaliya loo isticmaalayo in daah la saaro kalluumeysiga sharcidarrada ah ee Soomaaliya ka socda. Masuuliyiinta Wasaarada Kaluumaysiga iyo khayraadka Badda Soomaaliya, heer Federal iyo heer Dawlad Goboleed ayaa muddo dheer musuqmaasuq lugaha kula jiray, kana taajiray khayraadka dalka ee weli shacabka Soomaaliyeed ka oomanyahay, kana gaajaysanyahay. Soddonkii sano ee la soo dhaafay, Soomaaliya waxay noqotay meel gabbaad u ah maraakiibta kalluumaysiga iyo kuwa jariifka ee “siyaasad ahaan loo ilaaliyo” waana maraakiib danbiyo badan galay, dalal badanna baadigoob looga jiro, si loo maxkamadeeyo. Waxaa la joogaa xilligii lala xisaabtami lahaa mas’uuliyiinta Soomaaliya, lana joojin lahaa kalluumeysiga sharcidarrada ah ee ka socda badda Soomaaliya. Xukuumadda soo socota waa in ay dejiso qorshe qaran oo cad oo dib-u-habayn loogu samaynayo Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda iyo Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda.
Somali Fisheries Public Observation (SFPO) | Email: [email protected]
Dark Trawling Vessels in Coastal Galmudug & Corruption at the Highest Levels of Government, Federal & State
Maqaalo Kale 451 Siyaasadda & Dhaqaalaha 513 Wararka 28794